"Finoana no anamarinana ny olona, fa tsy ny asan'ny lalàna." Romana 3:28
"Hamarinina amin'ny asa ny olona, fa tsy amin'ny finoana ihany." Jakoba 2:24
Toa mifanohitra ireo andinin-tSoratra Masina atolotra antsika etsy ambony, saingy tsy izany velively ; vao mainka aza mifameno izy ireo.
- Iry; andininy voalohany dia nalaina tao amin'ny taratasy ho an'ny Romana, izay anehoan'ny apostoly Paoly ny votoatin'ny Filazantsaran'Andriamanitra (Romana 1:1). Notarihin'ny Fanahy Masina izy, nanaporofo fa ny olombelona dia tsy mahay mamonjy ny tenany velively, fa izany famonjena izany dia efa vitan'Andriamanitra irery, ary ny hany ilaina dia ny fandraisana io fanomezana maimaimpoana io, amin'ny alalan'ny finoana.
- Ity andininy faharoa kosa dia nosoratan'ny apostoly Jakoba, ary mamelabelatra lafiny vitsivitsy iainana amin'ny maha kristiana. Anisan'izany, hazavainy amintsika fa tsy mety raha tsy tazana ny finoan'ny mpino. Mifanohitra amin'izany aza, tokony ho hita mivaingana amin'ny alalan'ireo asa izay hitan'Andriamanitra ary hitan'ny olona rehetra, amin'ny ankapobeny.
Ho an'i Paoly, ny finoana dia asan'Andriamanitra, asa miteraka fiainam-baovao. Ho an'i Jakoba indray, ny asa dia porofon'ny fisian'izany fiainam-baovao izany.
Raha toa isika mirehareha noho izay ataontsika ho an'Andriamanitra, dia ampahatsahivin'i Paoly antsika fa "fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra" (Efesiana 2:8). Raha azon'ny hakamoana kosa isika, dia hoy i Jakoba amintsika: "Izaho kosa haneho aminao ny finoako amin'ny asako" (Jakoba 2:18).
Aoka tsy hohadinointsika ireo zava-dehibe roa loha ireo, ary aoka isika hisaotra an'Andriamanitra noho ny halavorarin'ny Teniny.